Fanisana 25 - Ny Baiboly
Fanisana toko 25
Fitondran-tena ratsy nataon'Israely - Zoton'i Finea.
1Nandritra ny nipetrahan'Israely tao Setima, dia rafitra nijangajanga tamin'ny zanakavavin'i Moaba ny vahoaka, 2ary ireo nanasa ny vahoaka ho amin'ny fisoronana nataony tamin'ny andriamaniny, ka nihinana sy niankohoka tamin'ny andriamaniny ny vahoaka. 3Niray tamin'i Beelfegora Israely, ka nirehitra tamin'Israely ny fahatezeran'ny Tompo. 4Hoy Iaveh tamin'i Moizy: Vorio daholo ny filohan'ny vahoaka rehetra, ka ahantony tandrifin'ny masoandro, eo anatrehan'ny Tompo, ireo ratsy, mba hitsaharan'ny firehetan'ny fahatezeran'ny Tompo amin'Israely. 5Dia hoy Moizy tamin'ny mpitsaran'Israely: Samia hianareo mamono ny olom-peheziny izay niray tamin'i Beelfegora.
6Ary inty nisy lehilahy anankiray amin'ny zanak'Israely tamy mitari-behivavy Madianita anankiray nankeo amin'ny rahalahiny, teo imason'i Moizy sy ny fiangonana'ny zanak'Israely rehetra, izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny trano lay fihaonana. 7Vao nahita izany Finea, zanak'i Eleazara, zanak'i Aarona mpisorona, dia nitsangana avy teo afovoan'ny fiangonana; nitondra lefona teny an-tànany, 8nanaraka ilay lehilahy Israelita tao anatin'ny lay ka nandefona azy roroa, dia ralehilahy Israelita sy ilay vehivavy, tamin'ny kibony. Nitsahatra tamin'izay ny loza teo amin'ny zanak'Israely. 9Nisy efatra arivo sy roa alina no matin'ny loza.
10Niteny tamin'i Moizy Iaveh ka nanao hoe: 11Finea, zanak'i Eleazara, zanak'i Aarona, mpisorona, no nampiala ny hatezerako tamin'ny zanak'Israely, satria noho izy nazoto nitandro ny voninahitro teo afovoan'izy ireo, dia tsy nandringana ny zanak'Israely aho tamin'ny fahazotoako hitandro ny voninahitro. 12Koa noho izany dia ilazao izy fa omeko ny fanekem-pihavanako; 13dia ho faneken'ny fisoronana mandrakizay, ho azy sy ny taranany mandimby azy, noho izy saro-piaro ho an'Andriamaniny, sy nanao ny fanonerana ho an'ny zanak'Israely.
14Zamarì no anaran'ilay lehilahy Israelita, niara-novonoina tamin-dravehivavy Madianita; zanak'i Salò izy, sady filoham-pianakaviana tamin'ny Simeonita. 15Ary Kozbì no anaran'ilay vehivavy Madianita novonoina, zanak'i Sora, filoham-poko, amin'ny fokom-pianakaviana, any Madiana izy.
16Niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 17Ataovy fahavalonareo ny Madianita, ka vonoy ireny, 18fa niseho ho fahavalonareo tamin'ny nataony anareo, raha nanangoly anareo tamin'ny hafetseny izy; ary Fogora no nentiny hanao izany, sy Kozbì koa, zanakavavin'ny lehibe anankiray any Madiana anabaviny, izay novonoina tamin'ny andron'ny loza nitranga noho ny amin'ny Fogora. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0057 seconds